Kuyini okuhle ngezocansi | Bezzia
UMaria Jose Roldan | 14/09/2021 23:03 | Ubulili
Noma kungabonakala kungamanga, Namuhla luselude ukhalo okusamele luhanjwe endaweni enempikiswano njengokuya ocansini. Kuze kube yiminyaka embalwa eyedlule, ubudlelwano bobulili obuhlukile nobabodwa babugqamile futhi kwabanye abantu ucansi lwalunenhloso eyodwa noma inhloso eyodwa, okwakungeyona enye ngaphandle kokukhiqizwa kwabantu. Ngenhlanhla izinto sezithuthuke kancane futhi sekuvele kujwayeleke kakhulu ukubona imibhangqwana engqingili noma imibhangqwana ethanda ukuya ocansini.
I-positivism yezocansi iya ngokuya isungulwa emphakathini futhi kuhle ukuba nomqondo ovulekile uma kukhulunywa ngomhlaba wezocansi. Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma nawe ngendlela eningiliziwe mayelana nalokho okushiwo ngenhla ngezocansi nangendlela engcono yokukusebenzisa.
1 Kuyini okuhle ngezocansi?
2 Ungayisebenzisa kanjani positivism yezocansi
Kuyini okuhle ngezocansi?
Kungamanje onabalandeli abaningi ngokwengeziwe futhi obheka ubulili njengento etholakala kumuntu okumele ithokozelwe ngokuphelele. I-positivism yezocansi ikhuthaza ukubekezela uma kukhulunywa ngocansi nokungadingi ukuzikhawulela kukho ngaphandle kwemithetho engabekwa yingxenye yomphakathi. Kufanele uthokozele ucansi ngokugcwele futhi ushiye izinkolelo zamanga ezinganikeli ngalutho.
Ngokuphathelene nezinhloso ezifunwa yilesi sikhathi samanje, okulandelayo kufanele kugqanyiswe:
Inkululeko nenhlonipho maqondana nakho konke okuphathelene nezocansi.
Kufanele ubekezelele kunoma yimuphi umkhuba wezocansi futhi ungayigxeki mahhala.
Kumele siqinisekise ukuthi imfundo maqondana nezocansi iyiqiniso futhi ibanzi ngangokunokwenzeka, mahhala kunoma yiluphi uhlobo lwamathebhu noma izinkambiso.
Ungayisebenzisa kanjani positivism yezocansi
Uma kukhulunywa ngokwenza lokhu kwamanje, ukuba nesimo sengqondo esihle ngocansi kubalulekile. Kufanele uqale ngokwakho futhi ususe konke ukucwaswa ongaba nakho mayelana nezocansi. Ukusuka lapha, kuhle ukusebenzisa le positivism ekusebenzeni ebudlelwaneni bomuntu siqu.
Ukuba nalesi simo sengqondo ngakho konke okuzungeze ucansi, Akuwona umsebenzi olula futhi kudinga isikhathi esithile ukuwenza. Uma ushintsha isimo sakho sengqondo bese uqala ukubona ucansi kolunye uhlangothi, ushintsho luzofika kuyo yonke imikhakha futhi ukujabula ezingeni lezocansi kuzoba kukhulu kakhulu.
Ngamafuphi, kubalulekile ukushiya emuva ama-taboos kanye namahlazo mayelana nezocansi bese uqala ukuba nomqondo ovulekile uma kukhulunywa ngakho. Ukuba madolonzima okuthile ngocansi nezinkolelo zamanga ngalo kungaba nomthelela omubi ebudlelwaneni.
Uma ngakolunye uhlangothi, umuntu enengqondo evulekile uma kukhulunywa ngezocansi, kuzoba lusizo olukhulu lapho enobudlelwano nabanye abantu. Kubalulekile ukuthi ingxenye yomphakathi wanamuhla iqale ukukhuthaza okuhle ngezocansi futhi funda ukuhlonipha nokubekezelela konke okuthinta umhlaba wezocansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubulili » Kuyini okuhle ngezocansi